Meizu M6s: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabida ayaa la xaqiijiyay | Androidsis
Meizu waa shirkad horumar joogto ah ka samaynaysa suuqa. Maahan tan ugu fiican ee la ogyahay, in kasta oo ay horeba nooga tageen taleefannadii ugu xiisaha badnaa. Wax markale lagu sameeyo aaladda dhexdhexaadka ah maxay soo bandhigayaan. Waxay ku saabsan tahay Meizu M6s, aalad leh wax kasta oo ay ku xukunto bartamaha.
Shirkadu waxay caan ku tahay nashqadeynta wanaagsan taleefannadeeduna waxay bixiyaan waxqabad wanaagsan. Wax yabooha taleefankan cusub ayaa waliba guuleysan doona. The qeexitaan buuxa oo Meizu M6s ah. Maxaan ka filan karnaa taleefanka?
Astaantu waxay ku dhawaaqday cusbooneysiin noocyo kala duwan oo telefoon ah ah sanadkan 2018 ah. Way fulinayaan waana taleefankan ayaa noqonaya midka ugu horreeya ee soo bandhiga cusboonaysiintaan. Maaddaama aan ku aragno wax badan oo ka mid ah suuqa, taleefanka ayaa dooranaya shaashad aan qaab lahayn oo leh saamiga 18: 9.
Kuwani waa qeexitaannada buuxa ee Meizu M6s:
Nidaamka qalliinka: Android 7.1.2 Nougat oo ka hooseeya Flyme 6.2
Screen: 5,7 inji HD + (1.440 x 720 pixels)
Gacaliye: Exynos 7872 14 nanometer at 2GHz
Xasuusta gudaha: 32GB / 64GB
Kaameerada hore: 8 Xildhibaan
Cámara trasera: 16 Xildhibaan leh fur f / 2.0
kuwa kale: Dual SIM LTE, WiFi, Bluetooth, Akhriska Faraha
Cabbirada: 152 × 72.54 × 8mm
Peso: 160 garaam
Telefoonku wuxuu sharad ku galayaa mid ka mid ah isbeddellada suuqa wuxuuna mar kale soo bandhigayaa a shaashad leh saamiga 18: 9. Sidoo kale, adoo sameynaya tan badhanka guriga ee qalabka sidoo kale wuu baaba'ayaa. Marka shaashadda gebi ahaanba waa taabasho.
Laba nooc oo ah Meizu M6skan ayaa lagu bilaabi doonaa suuqa. Mid wuxuu leeyahay xasuus gudaha ah 32 GB kan kalena 64 GB. Nooca taleefanka oo leh 32 GB oo keyd ah ayaa lagu qiimeeyaa qiyaastii 125 euro. Halka nooca qalabka leh 64GB kaydinta waxay ku kacaysaa ilaa 150 euro.
Taleefanka waxaa laga iibsan karaa laga bilaabo Janaayo 20 wadar ahaan afar midab (madow, qalin, dahab iyo buluug koronto). Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay qorsheyneysaa inay ku soo bandhigto suuqyo ka badan Shiinaha. Marka bilo yar gudahood waa inay sidoo kale gaaraan Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu » Meizu M6s: Noocyada noocyada cusub ee bartamaha